बजार साराश ४ माघ २०६८ | गृहपृष्ठ
Home बजार बजार साराश ४ माघ २०६८
बजार साराश ४ माघ २०६८
एनसेलका ग्राहक ७० लाख रू. ७० लाख पुरस्कार
माघ ३, काठमाडौं । निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल प्रालिले आफ्ना ग्राहक सङ्ख्या ७० लाख नाघेको बताएको छ । ‘७० लाख मानिसको दैनिकी र सञ्चारको अभिन्न अङ्ग बन्न पाएकोमा हामी गौरवान्वित छौं,’ एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पासी कोइस्तिनेनले भने ।
ग्राहक सङ्ख्या ७० लाख पुगेको अवसरमा कम्पनीले सातजना भाग्यशाली ग्राहकलाई १०÷१० लाख रुपैयाँका दरले कुल रू. ७० लाख उपहार प्रदान गर्ने कम्पनीकी कर्पोरेट कम्युनिकेशन म्यानेजर सञ्जु कोइरालाले जानकारी दिइन् । मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोइरालाले गोलाप्रथाबाट छानिएका सात भाग्यशाली सिम नम्बरलाई स्वर्णिम सिम कार्ड घोषणा गरिने बताइन् ।
र, अबको सात दिनभित्र सातओटा त्यस्ता सिम कार्ड गोलाप्रथाद्वारा छनोट गरिने बताइन् । यस योजनाअन्तर्गत रू. १० लाख जित्ने पहिलो भाग्यशाली नम्बरको घोषणा कार्यक्रमस्थलमै गरियो ।
यसअनुसार पहिलो भाग्यशाली सिम नम्बर ८९९७७ ०२१ ०२ ०६१८९ ११५० रहेको एनसेलले बताएको छ । यो योजना एनसेल प्रालिले सेवा शुरू गरेदेखि कम्पनीद्वारा उपलब्ध गराइएका सबैखाले सिमकार्डमा लागू हुने एनसेलले बताएको छ ।
उपहारमा लाग्ने करसमेत कम्पनीले आफै बेहोरेर विजेतालाई नगद रू. १० लाख नै प्रदान गर्नेछ । कोइरालाले प्रत्येक १० लाख ग्राहक सङ्ख्या थपिएसँगै कम्पनीले यो योजनालाई निरन्तरता दिने जानकारी गराइन् । यसअनुसार एनसेलको ग्राहकसङ्ख्या ८० लाख पुगेपछि ८ जनालाई यसैगरी पुरस्कृत गरिने र यो क्रम ग्राहक सङ्ख्या १ करोड नपुगेसम्म जारी रहने कम्पनीको भनाइ छ ।
स्पाइसको तीन सिम जाने मोबाइल
माघ ३, काठमाडां ै (अस) । टेलिटक प्रालिले नेपाली बजारमा तीनओटा सिमकार्ड प्रयोग गर्न सकिने स्पाइस ब्राण्डको डी ५८५८ मोबाइल फोन ल्याएको छ । यो मोबाइलमा दुईओटा जीएसएम र एउटा सीडीएमए कार्ड प्रयोग गर्न सकिने टेलिटकले बताएको छ । टेलिटक नेपालका लागि स्पाइस ब्राण्ड मोबाइलको आधिकारिक विक्रेता हो ।
ब्लूटूथ प्रविधिको यो मोबाइलमा वायरलेस एफएम रहेको छ । डिजिटल क्यामरायुक्त यो मोबाइलबाट फोटो सम्पादन र भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिने टेलिटकले बताएको छ । १ हजार ८ सय एमएएचको ब्याट्री प्रयोग भएकाले यो मोबाइल लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले मङ्गलबार प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसमा ८ जीबीसम्मको मेमोरी कार्ड रहेको छ । नेपाली बजारमा रू. ६ हजार ७ सय ९५ मूल्य तोकिएको यो मोबाइल सेटमा १ वर्ष र ब्याट्री तथा चार्जरमा ६ महीनाको वारेण्टी रहेको टेलिटकले बताएको छ ।
झमकलाई लायन्सको २ लाख
माघ ३, भैरहवा (अस) । साहित्यकार झमकुमारी घिमिरेलाई लायन्स क्लब अफ सिदार्थनगर होलीसिटीले नागरिक अभिनन्दन गर्ने भएको छ । शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएकी घिमिरेलाई नगद रू. २ लाख ११ हजार तथा ताम्रपत्रले सम्मान गरिने होलीसिटीका संस्थापक अध्यक्ष ओमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । सम्मान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा होलीसिटीले गत सोमवार भैरहवामा अन्त। क्रिया गरेको छ । आगामी माघ १६ गते गरिने सम्मानमा विभिन्न झाँकी, पञ्चेबाजा, उद्योगी–व्यवसायीलगायतको सहभागिता रहने बताइएको छ ।
आधा करोडमा रेष्टुरा“
माघ ३, दमौली (तनहुँ । तनहुँ सदरमुकाम दमौलीनजिक रू. ५० लाखको लागतमा आधुनिक सुविधासम्पन्न रिभर बीच कटेज रेष्टुराँ स्थापना गरिएको छ ।
मादी नदीको किनारमा रहेको रेष्टुराँ विदेशी र स्वदेशी पर्यटक लक्षित गरी स्थापना गरिएको सञ्चालक प्रकाश श्रेष्ठले बताए । नदीमा दैनिक ¥याफ्टिङका लागि यहाँ करीब ५० जना बा≈य पर्यटकहरू आउने उनको भनाइ छ ।
असोज–कात्तिकमा यो सङ्ख्या दैनिक १ सयभन्दा बढी हुने गर्दछ । ¥याफ्टिङका लागि आउने पर्यटक र पृथ्वी राजमार्ग हदँु ै भम्र ण गनर्हे रूका लागि लक्षित गरेर रेष्टुराँ स्थापना गरिएको अर्का सञ्चालक शान्तिरमण वाग्लेले बताए ।
सभासद् उर्मिला थापाको समेत लगानी रहेको यस रेष्टुराँमा लगानी अझ थप गरेर लजका रूपमा विकास गर्ने श्रेष्ठको योजना छ । उनका अनुसार २० वर्षका लागि जग्गा लीजमा लिएर रेष्टुराँ स्थापना गरिएको हो ।
‘सुन्दर प्राकृतिक वातावरण नियाल्न पाइने भएकाले यो रेष्टुराँ पर्यटकको आकर्षण बन्ने अपेक्षा छ,’ सभासद् थापाले भनिन् । मङ्गलवार आयोजित कार्यक्रममा प्रेमवादका प्रतिपादक सुप्रिम माष्टर गड्याञ्जलले रेष्टुराँको उद्घाटन गरेका थिए ।
पशुपति बैङ्कको रक्तदान
पशुपति डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेडले ९औं वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा सोमवार बनेपास्थित प्रधान कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ५५ जनाले रक्तदान गरेका छन् । नेपाल रेडक्रस केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि विदुर खड्काले ९४औं पटक रक्तदान गरेका थिए । रक्तदानका लागि आवश्यक सामग्री बैङ्कका कार्यकारी अधिकृत प्रकाश श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेर उनले कार्यक्रम उद्घाटन गरेको बैङ्कको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
युनिकको नगद लाभांश
युनिक फाइनान्स लिमिटेडले आव २०६७÷६८ को मुनाफाबाट शेयरधनीहरूलाई रू. २ करोड ७३ लाख ७० हजार नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको गत पुस २८ गते राजधानीमा बसेको सञ्चालक समितिको ४९औं बैठकले सो निर्णय गरेको हो । उक्त रकम हाल कायम रहेको प्रतिशेयर १३ दशमलव ६८५ प्रतिशत हुने कम्पनीले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जानकारी दिएको छ । ‘उक्त नगद लाभांश नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा साधारणसभाबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि वितरण गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार फाइनान्सको चुक्ता पूँजी रू. २० करोड पु¥याउन सफल भएको बताइएको छ ।
सूर्यदर्शनको नाफा डेढ करोड
स ू र्य द र्श न फाइनान्सले आव २०६७÷६८ मा रू. १ करोड ५४ लाख मुनाफा आर्जन गरेको बताएको छ । गत शुक्रवार राजधानीमा सम्पन्न कम्पनीको चौथो साधारणसभापछि जारी विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख छ । सो आवमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा निक्षेप र कर्जामा क्रमशः १९ दशमलव ४८ र ३८ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत वृद्धि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल कम्पनी मर्जको प्रक्रियामा रहेकाले उक्त मुनाफा जगेडा कोषमा राखिएको बताइएको छ ।
मुनालको शेयरपूँजी वृद्धि
मुनाल बचत तथ ा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले अघिल्लो आवको पुस मसान्तको तुलनामा चालू आव २०६८÷६९ को सोही अवधिमा शेयरपूँजी १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताएको छ । त्यसैगरी निक्षेप २१ प्रतिशत, ऋण लगानी ३६ प्रतिशत, जगेडा कोष १ सय ८२ प्रतिशत र सञ्चालन मुनाफा ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको संस्थाले मङ्गलवार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जानकारी दिएको छ । हालसम्म कुनै खराब कर्जा नरहेको संस्थाका प्रबन्ध सञ्चालक रवीन्द्रप्रसाद मैनालीले बताए ।
बुटवल पावरको लाभांश
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना शेयरधनीलाई २५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । राजधानीमा मङ्गलवार आयोजित कम्पनीका े उन्नाइसा ंै वाषिर्क साधारणसभाल े यस्तो निर्णय लिएको हो । कम्पनीले आव २०६६÷६७ को कारोबार रकममा रू. ४७ करोड ९८ लाखबाट १९ दशमलव ६ प्रतिशत वृद्धि गरी गत आवमा रू. ५७ करोड ३९ लाख पु¥याएको छ । सभामा कम्पनीका अध्यक्ष पदम् ज्याेि तल े लगानी थप गर्द ै लजै ान े बताए । उनल े थप पजूँ ी हकपद्र शये रमाफर्त सङ्कलन गरिने जानकारी दिए ।
कल्याणको नाफा २ करोड
क ल् य ा ण् ा सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडले चालू आव २०६८÷६९ पुस मसान्तसम्ममा रू. २ करोड १४ लाख सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको बताएको छ । त्यसगै री सस्ं थाल े रू. ४ कराडे ८८ लाख शये रपजूँ ी सङ्कलन, ३९ करोड ६० लाख निक्षेप सङ्कलन र ३८ करोड ८९ लाख कर्जा तथा अन्य लगानी गरेको छ । सस्ं थाल े साता ैं वषर्म ा पव्र शे गरके ा े अवसरमा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । मङ्गलवार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी संस्थाले जगेडा तथा अन्य कोषमा कुल रू. ६ करोड ९८ लाख ८५ हजार रहेको जानकारी दिएको छ ।